Wed, Jun 3, 2020 at 4:56pm
मंगलवार, ३ मंसिर २०७६,	आहाखबर	1.35K
सेल्फी लिने चलन पुरानो नै हो । सन् १८३९ मा रोबर्ट कोर्ने्लिउसले पहिलोपटक आफ्नो तस्बिर आफैले खिचेका थिए । पछिल्ला समयमा ऐनामा पनि आफ्नो तस्बिर लिन थालियो । सन् २००० आसपास एकल वा सामुहिक तस्विरहरु अनलाइनमा (विशेषगरी माइस्पेसमा) देखिन थाले पनि सन् २००५ पछि मात्रै सेल्फी शब्दको प्रयोग र सोसँग सम्बन्धित फोटोहरुको व्यापकता हुन थाल्यो । फेसबुक, ट्विटर, फ्लिकर जस्ता सामाजिक सञ्जालहरुले यसको प्रयोगलाई उचाइमा र्पुयाए। सर्वसाधारणदेखि राजनीतिज्ञ, कलाकार सबै क्षेत्रका सेलीब्रेटीहरु यिनको प्रयोग गर्दछन्।
१‍.अमेरिकाको साउदर्न कालिफोर्नियामा सेल्फी विषयमा पढाई हुने गर्दछ। ५। सन् २०१४ मा उत्कृष्ट अन्वेषण मध्य सेल्फी स्टिक पनि परेको थियो जसको सहायताले सेल्फी फोटो खिच्ने गरिन्छ।
२.सेल्फी तस्विरको आधारमा मानिसहरुको बानीबेहोराको बारेमा पनि अनुसन्धान गरिएको छ। जस्तैः तलबाट फोटो खिच्नेहरु सहयोगी स्वभावका हुन्छन्।
३.यही वर्षको सात महिनामा मात्र करिब २६ जना मानिसहरु सेल्फी लिँदा मरेका थिए। सन् २०१३ मा गरिएको अध्ययनले एक हप्तामा फेसबुकमा ३६८००० पटक सेल्फी शब्दको प्रयोग गरी स्टयाटस लेखिएका छन् भने १५०००० पटक ट्विटरमा।
४.दुई तिहाइ अस्ट्रेलियाका युवतीहरुले (१८ देखि ३५ वर्ष) सन् २०१३ मा सेल्फी फोटो खिचेका थिए। अधिकांश फोटोहरु फेसबुक तथा ट्विटर प्रयोजनका लागि थिए। १० सेल्फीका लागि एप्लिकेसन समेत बनाइएको छ।
५.अन्तर्रा्ष्ट्रिय सेल्फी अनुसन्धान सञ्जालले सेल्फीका विभिन्न आयामहरुका बारेमा छलफल गर्दछ।
६.रसियामा गाडी चलाउँदा पनि मान्छेहरुले सेल्फी खिच्न थालेपछि दुर्घटनाहरु बढे। सेल्फीकै कारण कतिपय मान्छेको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि सन् २०१५ मा रसियाले सेल्फी प्रयोग सम्बन्धि नीति नै बनायो।
७. सन् २०१३ मा सेल्फी शब्दलाई वर्षको शब्द घोषणा गर्दै अक्सफोर्ड डिक्सनेरीमा राखियो।
८. सेल्फी शब्दको सबै भन्दा बढी प्रयोग अस्ट्रेलियामा हुने गर्दछ। यो शब्दको सुरुवात पनि सन् २००२ मा अस्ट्रेलियाबाट भएको थियो।